एनओसी चुनाव : राजनीतिक हस्तक्षेप की आपसी द्वन्द्व ?
खेलकुद , विशेष - रिपोर्ट
विनय ज्याेती शुक्रवार, भदौ ६, २०७६, २३:५१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । आगामी भाद्र २० मा नेपाल ओलम्पिक संघ(एनओसी)को चुनाव हुँदैछ । चुनावमा दुई गुटको मुख्य दाबेदारी रहनेछ । ती दुई हुन जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठको गुट । यी दुवै नेकपा निकट पदाधिकारी हुन ।
नेकपाका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र सहाना प्रधानका छोरा उमेशलाल – ओली गुटका हुन् भने जीवनराम श्रेष्ठ – माधव कुमार नेपाल गुटका । त्यसैले चुनावमा नेकपाकै ठूलो भुमिको देखिने छ । तर, कांग्रेस निकट अर्को पक्ष पनि छ त्यो हो – रुक्मशमशेर राणाको पक्ष । उसले पनि सर्वोच्च अदालतबाट नेतृत्वको वैधानिकता पाएको छ । त्यही वैधानिकताको आधारमा राणा पक्षले समय–समयमा विरोध निकाल्ने गरेको छ ।
रुक्मशमशेर राणा पक्षधरको राजनीति
वि. सं २०६३ सालमा सम्पन्न चुनावमा ध्रुव बहादुर प्रधान एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर, उक्त निर्वाचन वैधानिक नभएको भन्दै राणा पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल असोज १८ गते सो बारेमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै राणा नेतृत्वको कमिटी वैधानिक भएको भन्ने फैसला सुनायो । सो फैसलाबाट रुष्ट भएका प्रधान पनि सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध अदालतमा अपिल गर्न पुगे । तर, वि. सं २०६८ बैसाख १८ गते पहिलेकै निर्णय सुनाएपछि रुक्मशमशेरले आफूलाई अध्यक्ष दिइनुपर्ने विवाद निकाल्दै आएका हुन् ।
यसै क्रमम राणाले २०७२ चैत ९ गते नेपाल प्रहरीको सहयोगमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा कब्जा जमाएर अध्यक्षको आधिकारीकता खोस्न खोजेका थिए । लगत्तै चैत १८ गते जीवनराम श्रेष्ठले आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओएसी) ले नेपालको अधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भनेर मान्यता दिएको भनेर पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यसपछि पनि रुक्मशमशेरले अध्यक्षको पद आफूले पाउनुपर्छ भन्न छोडेका छैनन् । तर, चुनावमा भने भाग लिनेछैनन् ।
उमेशलाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठबीचको राजनीति
यी दुवै अध्यक्षका प्रत्यासी हुन । उनीहरु एकै राजनीतिक पार्टी–नेकपानिकट मानिन्छन् । तर माधव कुमार नेपाल पक्षधर र केपी ओली पक्षधर छुट्टाछुट्टै गुट भएकाले उनीहरु आ–आफ्ने गुटबाट प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छन् । २०७२ भदौ १७ मा भएको चुनावमा पनि जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ प्रतिद्वन्द्वीको भुमिकामा थिए । तर उमेशलाल श्रेष्ठले चुनाव हारेपछि उनले मतदातालाई धोकेबाजको आरोप लगाए । उमेशले ०७६ को चुनावमा नयाँ एजेन्डाका साथ भाग लिने त्यतिबेला नै बताएका थिए । हाल उनी चुनावी अभियानमा लागेका छन् ।
उमेशले अहिलेको ओलम्पिक कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक पारदर्शिता र खेलाडीको हित सोच्ने नेतृत्वको अभाव रहेको औंल्याएका छन् । साथै यी तीन एजेन्डाको हकमा आफू अगाडि आउने बताइरहेका छन् ।
उता जीवनराम श्रेष्ठले पनि चुनावि अभियान थालेका छन् ।
चुनाव लक्षित अन्य कार्यहरु
चुनावमा केही नयाँ संघहरुलाई मान्यता दिएर आफ्नो तर्फ भोट हरु आकर्षित गर्न जीवराम लागिरहेका छन् । उनले ४ वटा नयाँ संघलाई मान्यता दिएका थिए ती हुन : टासी घले अध्यक्ष रहेको नेपाल गल्फ संघ, ठाकुर गैरे अध्यक्ष रहेको नेपाल रोइङ संघ, भुवन पाठक अध्यक्ष रहेको आइस हक्की संघ र राजेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल प्यान्टाथोलन संघ । यी सबै संघका पदाधिकारी नेकपा निकट पदाधिकारी नै हुन् । यी सबैले मान्यता पाइसकेको अवस्थामा कार्यसमिति भित्र तिव्र विवादका कारणले पहिले मान्यता पाइसकेको गल्फबाहेको तीन संघको मान्यता खारेज गरियो । त्यसपछि नेपाल ओलम्पिक संघमा कूल २७ संघ आवद्ध छन् ।
कमिटीको संरचनामा फेरबदल
साउन २० गते बसेको एनओसीको विशेष साधारण सभाले समितिको आकारलाई बढाएको छ । हाल कार्यसमिति १७ बाट बढाएर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ विधानअनुसार कार्यसमितिमा २ सचिवको सट्टा अब ३ सचिव हुनेछन् र उपाध्यक्षमा ५ जना हुनेछन् । यसलाई पनि चुनाव लक्षित कामका रुपमा हेरिएको छ ।
राखेपका अध्यक्ष एनओसीको प्रतिनिधि बन्ने
राखेपका वर्तमान अध्यक्ष पीताम्बर तिमिल्सिना पनि ओलम्पिकमा आउने गृहकार्य भएको छ । उनले नेपाल एथ्लेटिक्स संघलाई निर्वाचनमार्फत राखेपको वैधानिकता दिईएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिना एथ्लेटिक्स संघबाट एनओसीको प्रतिनिधि बन्दैछन् । यसअगाडि एथ्लेटिक्स संघको चुनाव पटक पटक रोकिएको थियो र उनले नै संघको चुनाव गराउन सहयोग गरेका थिए ।
संसदीय समितिमा उठेको विवाद
संसदीय समितिको २०७६ असार १८ गते बसेको बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मर्ज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटी र राखेपलाई मर्ज गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्टिय मापदण्डका आधारमा चल्नुपर्ने र राखेप देशको कानुन अनुसार चल्ने भन्दै सो निर्णय पास हुन सकेको थिएन् ।
एनओसी चुनाव : राजनीतिक हस्तक्षेप की आपसी द्वन्द्व ? आगामी भाद्र २० मा नेपाल ओलम्पिक संघ(एनओसी)को चुनाव हुँदैछ । चुनावमा दुई गुटको मुख्य दाबेदारी रहनेछ । ती दुई हुन जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठको गुट । यी दुवै नेकपा निकट पदाधिकारी हुन । शुक्रवार, भदौ ६, २०७६, २३:५१:००
‘ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल’ विश्वचर्चित फुटबलरका एक हिमायती हुन् – रोमेलु लुकाकू । बेल्जियन काला अल्पसंख्यक परिवारमा जन्मिएका लुकाकू केही समय अगाडि मात्र ‘प्रिमियर लिग’ छोडेर ‘सिरी ए’ प्रवेश गरे । उनी नयाँ लिगमा प्रवेश गरेको समाचार विश्वभर छायो, साथै लिगको दाेस्रो खेलमै उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको समाचारले फुटबल फ्यानलाई चस्स घोच्यो । शनिवार, कार्तिक २, २०७६, ०९:३८:००
परिषद् ऐनले चल्ने हो करिब २५ सय नेपाली विद्यार्थी छन्, जसले माईक्रोबायोलोजीमा मास्टर्स गरेका छन् । पढाई पुरा भएपनि उनीहरुले काम भने पाउन सकेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरु केही समययता आन्दोलित छन् । मंगलवार, भदौ १७, २०७६, ०२:०५:००
उपाधि यात्रामा आर्मीले बनायो ३ अंकको अग्रता
आयल निगमद्वारा मनाङको ‘टाइटल’ प्रायोजन
ब्रिगेड र सङ्कटाले अङ्क बाँडे
लिभरपुलद्धारा युनाइटेड पराजित
रोनाल्डो चम्किँदा युभेन्ट्सको सहज जित